Astaamaha iyo xiisaha ay leedahay wejiyada dayaxa | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii dhammaanteen waan ognahay kuwa kala duwan marxaladaha dayaxa iyada oo ay dhex marto bisha oo dhan (wareegga 28-maalmood). Waana iyadoo ku xiran maalinta bisha aan ku jirno aan u sawiri karno dayax gacmeheena si ka duwan sidii hore. Kaliya maahan isku meel maalmaha oo dhan, laakiin sidoo kale waxay kuxirantahay cirifka halka aan joogno. Wejiyada dayaxu waa wax aan ka badnayn isbeddellada ku yimaada habka uu u ifo markii laga daawado Dhulka. Isbeddelada waa kuwo meerto ah waxayna kuxiran yihiin mowqifka isku midka ah marka loo eego Dhulka iyo Qorraxda.
Ma rabtaa inaad si faahfaahsan u ogaato waa maxay wejiyada dayaxa maxaase u dhaca? Qoraalkan waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah 🙂
1 Dhaqdhaqaaqa dayaxa
2 Wareegga Dayaxa
3 Wejiyada kala duwan ee dayaxa
3.1 Dayax Cusub
3.2 Dayax madoobaadka
3.3 Rubuca bilaha
3.4 Dayax gibbous sii kordhaya
3.5 Dayaxa oo buuxa
Dayax gacmeedkeenna dabiiciga ah ayaa isku meerto, laakiin sidoo kale wuxuu si isdaba joog ah ugu wareegayaa meeraha. Inbadan ama kayar Waxay qaadataa qiyaastii 27,3 maalmood in lagu wareego Dunida. Sidaa darteed, waxay kuxirantahay booska aan ka helno ixtiraamka meeraheena iyo dhacdooyinka jihada ee laxiriirta Qorraxda, waxaa jira isbedello meerto sidaan u aragno. In kasta oo dayaxa loo malaynayay inuu leeyahay iftiin u gaar ah, maaddaama loo arki karo inuu yahay mid ka mid ah walxaha ugu ifka badan cirka habeenka, iftiinkani waa wax aan ka badnayn milicsiga iftiinka qoraxda.
Markuu wareegga dayaxu sii socdo, qaabkiisu wuxuu ka beddelaa kormeeraha Dhulka. Mararka qaarkood waxaad arki kartaa oo keliya qayb yar oo ka mid ah, marar kalena waa la arki karaa iyadoo gebi ahaanba ah, iyo marar kale oo kaliya ma jiro. Si loo caddeeyo, dayaxuna muu beddelo, laakiin waxay yihiin uun saameyn muuqaal ah oo ka dhalanaysa dhaqdhaqaaqa isla iyo ileyska qorraxda oo ka muuqda dushiisa. Kuwani waa xaglo ay kormeerayaashu ku kormeeraan qaybta iftiimisay ee aaggaaga.
Waxay noqon kartaa in Isbaanishka aan haysanno dayax buuxa, halka Mareykanka uu u sii kordhayo ama u sii yaraanayo. Dhammaan waxay kuxirantahay halka Dunida aan ka eegno dayaxa.
Dayax gacmeedku wuxuu xiriir la leeyahay mowjadaha dhulkeena. Tani waxay ka dhigan tahay in xawaaraha wareega ay la jaanqaadayso muddada wareegga. Sababtaas awgeed, in kasta oo dayaxu sidoo kale si isdaba joog ah ugu wareegayo dhidibkiisa marka uu wareego Dunida, marwalba waxaan aragnaa isla wajiga dayaxa. Nidaamkan waxaa loo yaqaanaa wareejin isku-dhafan. Waana taas, meel kasta oo aan ka eegno dayaxa, waxaan mar walba arki doonnaa isla waji.
Wareegga dayaxa wuxuu socdaa qiyaastii 29,5 maalmood kuwaas oo dhammaan wejiyada la arki karo. Dhamaadka wajiga ugu dambeeya, wareegga ayaa dib loo bilaabayaa. Tani marwalba way dhacdaa marna ma istaagto. Wejiyada ugu caansan ee dayaxa waa 4: dayax buuxa, dayax cusub, rubucii hore iyo rubuca koowaad. In kasta oo ay yihiin kuwa ugu caansan, haddana waxaa jira dhexdhexaadiyeyaal kale oo iyaguna muhiim ah oo xiiso leh in la ogaado.
Boqolkiiba iftiinka dayaxa cirka ayaa ku kala duwan sida qaababku midba midka kale u raacayo. Waxay ku bilaabataa iftiin 0% marka dayaxu cusub yahay. Taasi waa, waxba kama daawan karno cirka. Waxaad moodaa inuu dayaxu ka cirib tiray cirkayaga. Maaddaama wejiyadaha kaladuwan ay dhacayaan, boqolleyda iftiinku wuu kordhayaa illaa uu ka gaaro 100% dayaxa buuxa.
Weji kasta oo dayaxa ka mid ahi wuxuu socdaa ugu yaraan 7,4 maalmood. Tan macnaheedu waxa weeye in toddobaad kasta oo bisha aan helno dayaxa qiyaastii hal qaab. Maaddaama wareegga dayaxu uu yahay elliptical, markan iyo qaababku way kala duwan yihiin. Guud ahaan, dhammaan wejiyada dayaxa ee leh iftiin badan waxay socdaan 14,77 maalmood waxayna la mid yihiin wejiyadaas madoow.
Wejiyada kala duwan ee dayaxa
Kahor intaanan bilaabin sharaxaadda wejiyada dayaxa, waxaa muhiim ah inaan xoojino in wejiyada aan magacaabi doonno ay yihiin hal dariiqo oo kaliya oo bisha looga dareemi karo halka aan ka joogno Dunida. Isla mar ahaantaana, laba goobjooge oo kala jooga meelo kala duwan oo Dunida ah ayaa dayaxa u arki kara si ka duwan. Waxba kama jiraan xaqiiqda, goobjoogaha ku sugan waqooyiga woqooyi wuxuu awoodi doonaa inuu arko dayaxa oo dhaqdhaqaaq ka socda midig ilaa bidix koonfurta koonfureedna wuxuu ka socdaa bidix ilaa midig.
Markay tan caddeeyeen, waxaan bilaabaynaa inaan sharraxno wejiyada kala duwan ee dayaxa.
Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa bilaha cusub. Marxaladdan, cirka habeenkii waa mid aad u madow waana adag tahay in dayaxa laga helo mugdiga. Wakhtigan, dhinaca dahsoon ee dayaxa ee aynaan arki karin qorraxda ayaa iftiimisay. Si kastaba ha noqotee, wejigan kama muuqan karo Dhulka sababtoo ah wareegga la isku waafajiyay ee kor ku xusan.
Inta lagu jiro dhammaan marxaladaha uu dayaxu maro, laga bilaabo cusub ilaa buuxda, dayax gacmeedku wuxuu ku socdaa 180 digrii oo meertadiisa ah. Inta lagu jiro wejigan wuxuu socdaa inta udhaxeysa 0 iyo 45 digrii. Waan awoodnaa oo keliya arag inta u dhexeysa 0 ilaa 2% dayaxa markuu cusub yahay.
Waa wajiga aan ku heli karno dayaxa oo soo dhowaanaya 3 ama 4 maalmood kadib dayaxa cusub. Waxay kuxirantahay halka aan dhulka ka joogno waxaan ka arki doonnaa cirka dhinackiisa ama dhinaca kale. Haddii aan joogno woqooyiga woqooyi, waxaan ka arki doonnaa dhinaca midig haddii aan joogno koonfurta koonfurta waxaan ka helaynaa dhinaca bidix.
Marxaladdan dayaxa waxaa la arki karaa qorrax dhaca ka dib.Sidaas darteed wuxuu ku socdaa inta u dhexeysa 45 illaa 90 digrii oo uu ku wareego inta lagu jiro wejigan. Boqolkiiba muuqaalka dayaxa ee socdaalkan waa 3 ilaa 34%.
Waa markii nuska diskiga dayaxu iftiimiyo. Waxaa la arki karaa duhurkii ilaa saqbadhkii. Marxaladdan waxay ku socotaa inta u dhexeysa 90 iyo 135 digrii oo ay ku meeraysato iyo waxaan arki karnaa inay iftiimisay inta udhaxeysa 35 iyo 65%.
Dayax gibbous sii kordhaya
Aagga la iftiimiyay waa in ka badan kala badh. Waxay dhigtaa waaberiga ka hor waxayna gaaraan cirka ugu sarreeya cirka fiidkii. Qaybta dayaxa la arki karo waa inta udhaxeysa 66 iyo 96%.
Dayaxa oo buuxa
Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa dayaxa oo buuxa. Waxaan ku jirnaa marxaladdii dayaxu si buuxda u muuqdo. Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay Qorraxda iyo Dayaxu waxay toos ugu toosan yihiin Dhulka bartamahooda.
Marxaladdan waxay ku jirtaa meel gebi ahaanba ka soo horjeedda tan dayaxa cusub oo ah 180 digrii. Waxaa la arki karaa inta u dhexeysa 97 ilaa 100% dayaxa.
Dayaxa buuxa kadib, wejiyada soo socda ee u dhigma waa:
Dayax gibbous raba
Dhammaan wejiyadahani waxay leeyihiin astaamo la mid ah billowga bisha, laakiin qalooca waxaa lagu arkaa dhinaca ka soo horjeedka (iyadoo kuxiran cirifka halka aan joogno) Hormarka dayaxu hoos ayuu u sii dhacayaa ilaa uu ka gaadho dayaxa cusub mar labaad oo wareegga dib loo bilaabo.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan wejigiisa dayaxu ku caddaaday.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Fases de la luna
John Dalton Taariikh Nololeedka